Trump oo sheegay inuu cod u doonanayo gobollada Dimuqraadiga laga taageero - iftineducation.com
iftineducation.com – Musharaxa xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, ayaa sheegay in uu labada maalmood ee ugu dambeeya ololaha doorashada beegsan doono gobollada Dimuqraadigu taageerada badan ku leeyhiin.
Wuxu tegi doonaa gobollada Pennsylvania, Michigan iyo weliba Minnesota oo ilaa sannadkii 1972 aan cod sidaa u buuran laga siinin xisbiga Jamhuuriga.
Sabtidii ayaa isagoo goor fiid ah kala hadlaya dadka fagaare ku yaal magaalada Reno ee gobolka Navada, ay ilaaladiisu si deg deg ah ugala carareen goobtii uu taagnaa. Trump ayaa isagoo khudbadaynaya wuxu arkay wax uu ka shakiyay ka dibna wuu aamusay taasina waxay keentay in goobtii uu taagnaa laga dhaadhiciyo haseyeeshee daqiiqado ka dib ayuu ku soo noqay halkii uu khudbada ka waday.
Markuu hadalkii dib u bilaabay ayaa Trump wuxu yidhi “qof qaba in arrintani ii sahlantahay ma jiro… waxaan doonayaa in aan nabad sugidda u mahadnaqo”.
Waxa jira warar sheegay in ninka uu ka shikiyey baastoolad sitay, laakiin nabad sugiddu markii ay ninka badheen ka dib, waxay sheegeen in ” ay si buuxda u baadheen goobta iyo ninkaba oo aanay wax hub ah ka helin”.
Austyn Crites, waa ninka laga shikiyey eh, markii la qabtay wuxuu wadhfinayey boodh yar oo ay ku qorantaay Jamhuuriyiinta ka soo horjeeda Trump.